FOKO: Manasongadina an’i Madagasikara ireo bilaogera. · Global Voices teny Malagasy
FOKO: Manasongadina an'i Madagasikara ireo bilaogera.
Voadika ny 04 Aogositra 2018 4:28 GMT
(Lahatsoratra teny Anglisy efa tamin'ny Marsa 2008)
Ravaravan'ny Rivo-doza Ivan i Madagasikara tamin'ny volana lasa ary zara raha nanamarika izany ny gazety iraisam-pirenena. Mitovy amin'ny Tafio-drivotra Katrina ny hery sy ny fandravana naterak'izany, na dia milaza amintsika aza i Andriankoto ao amin'ny Foko Madagascar fa “saika tena vitsy” ny fitantarana avy amin'ny gazety Amerikana sy Frantsay. Nandray ny andraikitra tamin'ny famenoana ny vaovao banga ireo bilaogera Malagasy:
Mety hoe nitantara momba ny vanim-potoanan'ny rivo-doza ao amin'ny Ranomasimbe Indiana ny fampahalalam-baovao mahazatra saingy nameno ny banga ny fampahalalam-baovaon'olon-tsotra ary niezaka nanao izay vitany mba hanokatra hatrany ny fifandraisana ao anatin'ny firenena sy izao tontolo izao.
Niafara tamin'ny famoronana sarintany ifarimbonana ahitana ny toe-draharaha ankehitriny ao amin'ny faritra maro ao Madagasikara ny ezaka nataon'ireo bilaogera tamin'ny fitantarana ny voka-dratsin'ny rivo-doza rehefa niteraka tondra-drano sy ny fihontsanan-tany goavana ao Antananarivo sy ny manodidina i Ivan.
Niavaka tamin'ny valinteny ihany koa ny bilaogera Malagasy ao amin'ny FOKO blog club, tetikasa bilaogin'ny FOKO. Avy amin'ny FOKO Blog:
iray amin'ireo bilaogera mavitrika indrindra, Avylavitra…nampiseho sary antsika misy ny rivo-doza Ivan nandrava an'i Madagasikara
Nampihatra ny fianarany bilaogy lahatsary ihany koa i Avylavitra tamin'ny fandefasana lahatsary vitsivitsy tao amin'ny YouTube ahitana ny voka-dratsy nateraky ny Rivo-doza Ivan.
Feno ny fotoanan'ny FOKO tamin'ny volana lasa noho ireo asa marobe, anisan'izany ny atrikasan-dahatsary sy sary voalohany nataon-dryzareo.
Ohatra tamin'izany, jereo ny kaonty Flickr-n'i Avylavitra misy ny fitantarana momba ny rotaka tao ivelan'i Kianja monisipaly Mahamasina nandritra ny lalao baolina kitra.
Namboly hazo tao amin'ny faritr'i Andranovelona niaraka tamin'ny Vondrona Tanora Namana SeraSera ihany koa ny FOKO. Avylavitra, mpikambana ao amin'ny Namana SeraSera nandefa sary vitsivitsy misy ny fambolen-kazo izay azo jerena ao amin'ny rakitsary Flickr-ny.
Nanao bilaogy fanehoan-kevitra ihany koa izy ireo. Maro ireo bilaogera nandrisika ireo vaovao mba hanjohy ny lahatsoratry ny hafa miaraka amin'ny toro-hevitra sy fanehoan-kevitra mankahery. Ka nahita ny fitomboan'ireo fanehoan-kevitra marobe tamin'ny bilaogy mpandray anjara izahay sy ny fitomboan'ny maoralin'ireo bilaogera.
Nisy ireo fantin-dahatsoratra telo tamin'ny volana Janoary izay nadika ho an'ny vahiny mpanjohy ny Foko izay azo jerena ato. Aza adinoina azafady ny dikan-teny nataon'ny gazety_adaladala raha te-hijery momba ny fiangarana amin'ny fiantsonan'ny fiara ao Antananarivo manomboka vao maraimbe hatramin'ny hariva be.
Na dia teo aza ny rivodoza, nanohy ny drafitra fivelarana mankany amin'ny tanàna hafa eto Madagasikara ny FOKO nankany Toamasina.
“Ny tombontsoanay amin'ny fitondrana ny Foko Blog Club ao Toamasina dia mba hisarika ny saina kokoa ao amin'ny faritra tena mavitrika izay manana fahaiza-manao lehibe ireo tanora sy ny vondrom-piarahamonina ary manana tantara marobe hozaraina amin'izao tontolo izao. Mazava hoa azy fa hisarika ny saina momba ny tontolo iainana izay tsy dia resahana firy ao amin'ny aterineto na koa eny ifotony mihitsy aza ny vondronay ao Toamasina. Noho ny firokin-dry zareo hafa mahafinaritra, ny morontsiraka sy ny hatsaram-panahin'izy ireo mahavariana, hahavariana antsika vetivety ity vondrona ity!”
Nisosa tsara ny atrikasa ary azonao atao ny mijery ny fanehoan-kevitr'ireo bilaogera nampiofanina vao hainganana ato tao Toamasina .
Fantina lahatsoratra dimy tamin'ny volana Febroary an'ireo bilaogeran'ny FOKO no natao fandikan-teny tao amin'ny pejin'ny Foko Blog Club. Milaza ny fomba vetivety nanombohan'izy ireo naneho hevitra tao amin'ny bilaogy ny roa tamin'ireo bilaogera ao Toamasina.
Manohy ny lahatsorany ho amin'ny teny Anglisy ankehitriny i Karenichia, avy ao amin'ny vondrona FBC-Tana-Youth. Mizara ny ahiahiny momba ny fiarahamonina Malagasy izy ary manontany teny hoe “Nahoana no zava-dehibe ho an'ny fiarahamonina sy ny orinasa Malagasy ny manana mpiasa mandany taona maro any andafy?”
Mandritra izany, nanamafy ny fifandraisan'izy ireo tamin'ireo nahazo vatsy hafa tamin'ny Rising Voices ny FOKO, nanatsoaka lesona tamin'ny traikefan'izy ireo ary nampihatra ny toro-hevitr'izy ireo mba hitantanana atrikasa amim-pahombiazana. Nametraka lahatsoratra momba ny Nari Jibon, Hyperbarrio sy Voces Bolivianas tao amin'ny bilaoginy koa izy ireo.
Hery, mpikambana ao amin'ny Vondrona Namana Serasera kosa mikasa hitondra ireo tanora sy hampianatra azy ireo hibilaogy manokana. Vakio ny resadresaka niarahana tamin'i Hery momba ny TIC sy ny tanora ao Madagasikara.
Jereo azafady ny bilaogy tetikasan'ny FOKO ao amin'ny Rising Voices sy ny FOKO Club Blog (na misorata anarana ao aminy) raha hanaraka vaovao farany hatrany momba ity tetikasa mahavariana ity.